Dipoavatra | Tantsaha anaty aterneto | January 2020
Lisitry ny karazan-tsakafo mafana izay mitombo ao an-trano
Ny bitterly pepper with great success can not be grown in the garden, but also at home, in pot. Vokatr'izany, mahavoky zava-manitra sy zavamaniry mahafinaritra ianao. Androany, misy karazana vary maro karazana ao am-pivarotana, saingy hodinihintsika ny karazan-tsakafo mafana sy tsara indrindra amin'ny fambolena eo amin'ny varavarankely.
Fomba fambolena dipoavatra amin'ny ririnina: fomba fitsaboana
Manomboka ny volana febroary, manomboka ny maridre ny menaka: manangom-bokatra, mamafy ny zana-ketsa ary mamelona azy ireo toy ny zaza madinika, mamolaka azy eny an-tany, miaro azy ireo amin'ny hatsiaka, mahita ny manodidina, ny pritenit, ny rano, ny mangetaheta, ny manala baraka ary ny toy izany. Ary ankehitriny, ny farany, ny fijinjana, fa ny tena mahavariana! Ahoana ankehitriny no ahafahan'ity harena ity hikaroka ny zavatra ilaina rehetra ao anaty dipoavatra, ampy ho an'ny rehetra sy maharitra?
Inona no tombony maitso maitso?
Ny dipoavatra bolongana maitso (tsindrin-tsakafo) dia vokatry ny fambolena voninkazo isan-taona ao amin'ny fianakaviana Solanaceae. Miely patrana sy mamboly ao Ukraine, Rosia, Italia, Romania, Boligaria, Gresy izany. Androany dia legioma malaza, izay saiky ny rehetra no mahalala. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny lanjan'ny sakafo sy ny voka-dratsin'ny poizina maitso izahay, ary koa ny tombotsoany sy ny fahasimbany amin'ny vatana.
Green pepper: ny soa sy ny loza
Ny fahavaratra dia fotoana mahagaga rehefa mihinana legioma vaovao, feno ny tombontsoa, ​​ny tsirony ary ny fivoahana amin'ny loko samihafa. Poti-dite marevaka: mena, maitso, volomparasy, mavo ary volomparasy mihitsy no manova ny sakafo ary mamolavola ny sakafo, mahasoa, manome azy ireo tsiro manokana sy endrika ivelany.
Ahoana ny fomba hanamboarana menaka amin'ny teny armeniana amin'ny ririnina
Ny firenena tsirairay dia manana fandaharam-potoana fitsangatsanganana. Ohatra, voanio pimenta, na paprika. Ireo karazan-tsakafo ireo dia miovaova arakaraky ny habetsaky ny vokatra, ary koa amin'ny zava-manitra sy zava-manitra. Tsy misy fiaraha-misakafo armenianina ny armenianina, arakaraka ny tsirony sy ny tsirony mahalany.
Manao pepotsin'ny ririnina amin'ny ririnina: fomba tsara indrindra ho an'ny fianakavianao
Chillies, mamy na mangidy - dia mikasika ny fambolena iray ihany, momba ny doka. Tsara izy io na toy ny savoka ary toy ny sakafo misaraka. Ary ilaina izany, noho izany dia tsy afaka ny hatahotra ianao amin'ny fifehezana ny tenanao maranitra. Inona no legioma tsara ary inona no tsaratsara kokoa amin'ny fanamboarana azy - hahafantarana manaraka. Fotoana fohy momba ny tombontsoa avy amin'ny mofomamy mafana Ny vokatra dia marefo amin'ny tsirony noho ny fisiana capsaicine ao amin'ny alkaloid.
Boligara dolara amin'ny ririnina: ahoana no fomba hanangonana legioma
Ny dipoavatra bolongana tsara voaomana dia tsy hanamboatra latabatra afa-tsy ihany, fa handray tsara koa ny toerana hanomezam-boninahitra ny tifitra matsiro indrindra. Ireo cooks maro dia mandinika ireo zavatra mahavokatra mba hamoronana sangan'asan'ny sakafo. Andeha hojerentsika ny fomba hanomanana an'io legioma io amin'ny ririnina, mba ho tonga haingana sy matsiro.
Ahoana no hanamboarana boloky mamy ho an'ny ririnina: dingana isan-karazany amin'ny sary
Ny diplaoma Bulgarie dia tafiditra ao amin'ny lisitry ny legioma tena ilaina noho ny habetsaky ny ascorbic asidra ao amin'ny fananganana. Ity legioma maitso ity dia mora ampiasaina ary azo ampiasaina: mihinana sakafo vaovao, maraokana, mafana, voaoty amin'ny ririnina. Hiresaka momba ny iray amin'ireo fomba fampihenana ny legioma ny ririnina, izany hoe ny fanangonana, amin'izao fotoana izao.
Fomba ahoana no hanakanana ny dipoavatra amin'ny fikarakarana ny ririnina: resipe miaraka amin'ny sary
Ny voankazo voarara dia iray amin'ireo sakafo malaza indrindra sy malaza indrindra eto amin'ny firenentsika amin'ny ririnina. Na dia izany aza dia tsy ho vita mihitsy ny maka ny tsiro vaovao, avo lenta sy tsara indrindra amin'ny vidiny sarobidy amin'ny ririnina. Amin'ity tranga ity, ny vahaolana tsara indrindra dia ny fanangonam-peo amin'ny famokarana ririnina. Ny fanandramana fofona dia tsotra ary ho eo ambany hery, na dia tsy manana traikefa mivantana aza ianao.
Ahoana no hanomanana tsimok'aretina Bolgara mandritra ny ririnina: Dingana tsikelikely amin'ny sary
Ao amin'ny ririnina dia mangatsiaka ny manokatra trano fikarakarana tokantrano ary mankafy ny tsirony, mampahatsiahy ny fahavaratra. Ny iray amin'ireo vokatra malaza indrindra amin'ny fiomanana amin'ny ririnina dia ny dipoavatra Bulgary mamy, ny vatany dia mihazona ny lanjany ary mamony mahafinaritra. Ny tena malaza indrindra dia ny manangona legioma marefo ao anaty sambo, ny fitehirizana dia voatahiry tsara ary misy tsiron-tsiramamy mamirapiratra sy tsiro mahafinaritra, ary mitazona ny hafanam-pony ny pulp.
Safidy ho an'ny fikarakarana mofomamy mafana amin'ny ririnina, fomba fanamboarana
Raha sangisangy amin'ny famokarana ririnina nentim-paharazana, voatabiha sy lecho ianao, dia manoro hevitra anao hanandrana fitsangatsanganana sy mofomamy mafana. Safidy ho an'ny fametahana azy. Ary, tsy isalasalana, mampitombo ny sakafo amin'ny ririnina, ary manome azy ireo vitaminina tena ilaina. Amin'ny sasantsasany amin'izy ireo, ny mahaliana sy mahavariana indrindra dia hampahafantatra anareo ato amin'ity lahatsoratra ity izahay.
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Dipoavatra